E. Obama: nidina tany amin'ny helo ny zaza iray feno babo. - FIVAVAHANA TELY
E. Obama: nidina tany amin'ny helo ny zaza iray feno babo.
RARINYTHE UNESFAMPIANARANA PRESS
Ny fanesorana an'i Ernest Obama amin'ny fiantsoana ny tompon'andraikitra ambony amin'ny fantsona fahitalavitra manokana dia ny Vision 4, dia mitohy ny fitrandrahana izao tontolo izao.
Tsy nisy na iza na iza naneho an'io haingo tsy mahazatra tamin'ny 18 jona io tao amin'ny foiben'ny tarika Anecdote. Ny zandarin'ny zandarimaria teratany Efoulan dia manao amboletra amin'ny fananganana consortium izay mangatsiaka an'i Ernest Obama ao amin'ny biraony ary nafindra tany amin'ny SED noho ny fiampangana ampy: famotehana ny fahatokisan-tena, famadihana avo, famelana ary fampiasana ny diso, diso. Amin'ity alatsinainy 22 jona ity dia hatolotra ny fampanoavana izy.
Ho fanatanterahana izany, ny CEO Amougou Belinga dia nandidy ny orinasa frantsay lalàna Wilson amin'ny anaran'ny Telesud Groupe Vision 4 handeha any Cameroon. Ny filoha teo aloha Charles Tchoungang dia ao anatin'ny oniversite mpisolovava antsoina koa amin'ny consortium Anecdote amin'ity tranga ity. Nandritra ny fikomiana goavam-be amin'ny fanarenana politika, i Maurice Kamto dia niaro ny voampanga, na dia teo aza ny toerany ho toy ny mpampanoa lalàna teo aloha nandao ireo mpiray tsikombakomba taminy tany am-ponja.
Avy ao amin'ny fahitalavitra Ariane, hiaina fiakarana meteorika ao anatin'ny vondrona Anecdote i Ernest Obama. Ny talentany dia manindrona ny efijery eo ambanin'ny mason'ny mpiambina azy, Jean Pierre Amougou Belinga, tsy vitan'ny hoe manome azy amin'ny asa miasa tsara izy, fa manarona sy mampiditra ny fikarakarana kely ho an'ny olona sasany. Ernest Obama dia avy amin'ny fitsangatsanganana CEO rehetra. Nandeha fiaramanidina tsy miankina izy ary nanamboatra ny tranonkalany tamin'ny tambajotra fifandraisan'i Amougou Belinga, hatrany amin'ny famoahana ny bokin'ny adiresiny.
Avy amin'i Christophe De Chavanne ka hatrany Bruno Masure, avy amin'i Michel Denisot ka hatramin'ny Patrick Drucker amin'ny alàlan'i Patrick Poivre Davor, ireo kintana tamin'ny fahitalavitra ireo dia niaiky fa mikarakara ny olo-malaza sy ny loha lehibe izay omen'ny efijery kely. Ankoatra ny fiahiahiana ny fanodinkodinana ara-bola, i Ernest Obama no maty amin'ny fahitalavitra manavotra. Ankizy iray mahantra izay nandao ny tany niaviany Ebogo tany Mefou sy Afamba, izy dia nipetraka tao amin'ny distrikan'i Mvog-Ada izay nipetraka tao amin'ny mahamety azy. Amougou Belinga dia manambara izany an'izao tontolo izao. Indrisy, manadino ny zava-drehetra ny lehilahy afa-tsy ny tsy mankasitraka.
Rehefa nanala ratsy ny fanesorana azy tamin'ny fitantanana ankapobeny ny Fahitana faha-4 i Ernest Obama dia hitombo ny fihantsiana sy ny bravado Hitantsika mivantana izy, indrindra eo amin'ny seho "Tour d'écizon", izay nolaviny tamim-pitandremana ny hevitra rehetra nataon'i Parfait Ayissi, ny fanoloana azy. Manambara amin'ny tambajotra sosialy izy, ny famoahana boky iray momba ny asa maha-olombelona an'i Paul Biya, fampidirana nataon'i Faustin Archange Touadera ary taorian'ny teny avy amin'i Samuel Mvondo Ayolo. Fanadihadiana natao, ireo olona roa ireo dia tsy manaiky ny tenany ao anatin'ity tetik'asa fanontana ity.
Antenaina ihany koa izy ho talen'ny fampielezankevitra mpanohitra an'i Faustin Archange Touadera amin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka ao amin'ny Repoblika afovoany afovoany.Tamin'ny tsy fankatoavany ny andraikiny dia namoaka vaovao stratejika avy amin'ny vondrona Anecdote izy. Betsaka ny lesoka izay manamarina ny fametrahana ny fahamarinana ho fanavotana ny fiaraha-miasa iray izay nanjary mampidi-doza ho an'ny fanjakana natsangan'ny herin'ny asa sy ny sorona maro. Mahatsikaiky, i Amougou Belinga, nitafatafa tamin'i Ernest Obama momba ilay fandaharana hoe "Décryptage", niaiky fa: "aleoko ilay mpiara-miasa mahatoky nefa tsy mahomby amin'ny mpiara-miasa mahay nefa tsy mivadika". Amin'ity fehezanteny ity, misy ny antony manosika ny fifandonana eo amin'ny ray sy ny zanany lahy.
loharano: https: //actucameroun.com/2020/06/23/cameroun-groupe-lanecdote-decheance-dun-enfant-gate/? utm_source = fampandrenesana & utm_medium = push & utm_campaign = fcm
governemanta hitsapa zavatra mifandray mifandraika amin'ny fanaraha-maso amin'ny alàlan'ny volana Jolay
Egypt: 300 tapitrisa dolara avy amin'ny EBRD hanohanana orinasa miady saina